သီချင်းနားထောင် ပြီးအိပ်တက်သော Android ဖုန်းဘော်ဘော်တို.အတွက် jetAudio Music Player Plus V-3.5.1 | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
သီချင်းနားထောင် ပြီးအိပ်တက်သော Android ဖုန်းဘော်ဘော်တို.အတွက် jetAudio Music Player Plus V-3.5.1
Posted on October 31, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	သီချင်းနားထောင် ပြီးအိပ်တက်သော Android ဖုန်းဘော်ဘော်တို.အတွက် jetAudio Music Player Plus နောက်ဆုံးဘားရှင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်…….လူတော်တော်များများ ဟာ နာကြပ်တပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်ကာ အိပ်ပျော် သွာတက်ကြပါတယ်…….တစ်ည၊နှစ်ည ဆိုရင်တော ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး။ဒါပေမယ်. နေစဉ်၊ညတိုင်း ထိုကဲ့သို. သင် အိပ်ပျော် နေပါက သင်၏ နား ပျက်စီးမှာကို သင်သတိထားမိပါသလား? ထိုကဲ့သို. အိပ်တက်သောဘော်ဒါတိုအတွက် ကျွန်တော် လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်…..jetAudio Music Player Plus ပါ။ ဒီ Player လေးက သင်တို.ကိုကူညီပါလိမ်မည်။ ဘယ်လိုကူညီမလည်းဆိုတော့ မိမိ တို.စ အိပ်တော.မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာ သီချင်း အလိုအလျှောက် ၇ပ်စေချင်လည်း? ရပ်ချင်သော အချိန်အား သတ်မှတ်ပေးထားလို.ရပါတယ်……သုံးကြည်.လိုက်ပါ ခင်ဗျ။ October 28, 2013 နေ.တွင် Update ပေးထားပြီး Google Play တွင် $ 3.99 ဖြင်ရောင်းထားသော်လည်း အောက်ကလင်.တွင် Free ဒေါင်းပါ ခင်ဗျ။
— Features for Plus version only —* 20-bands graphic equalizer* Display lyrics in tag (Unsynchronized lyrics)*2lock screens* 14 app widgets : 4×1 (#2), 4×2 (#3), 4×3 (#3), 4×4 (#3), 3×3, 2×2, 2×3* Pitch shifter* Last.fm (requires official Last.fm app)* Precise playback speed control (50% ~ 200%)* Light Gray/White theme for browser (Plus only)* Grid mode for Artist/Song/Folder/Genre browser* Adjust FF/REW interval* Expanded notification bar (for JB)* MIDI playback (using jetAudio WaveTable MIDI synthesizer engine)
— Features for Basic/Plus version —* Can choose between3List modes or 10 Grid modes for layout style(In Basic version, layout style can be chosen in Album browser only)* X-Wide, Reverb, X-Bass sound effects* AGC (automatic gain control) to avoid volume fluctuations between tracks* Speed control from 50% to 200% (pitch adjusted)* Crossfading, Gap-less playback* Fade-in/Fade-out * Browser and play music by artits, albums, songs, playlists, genres and folders* Balance/Volume control* Sleep timer up to 24 hours* Flick up to post what you’re listening to on Facebook/Twitter* Flick down to show Now Playing* Flick left/right to play next/previous* Lock screens* Repeat A<->B* Headset button control– press to pause/resume– double/triple press to play next/prev– long press to mute or TTS (time, title)* Multi-select function (Delete/Add to playlist)* Keep screen on, Lock orientation options* Shake to play next/previous track* Supporting formats:MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD (module formats S3M, IT), SPX, AIFF
KOMIN (IDROID)ဒေါင်းနည်းများမသိပါက ဒီမှာ သွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ အဆင်ပြေရင် ဆိုဒ်က ကြော်ငြာများကို တစ်ချက်လောက်နှိပ်သွားပါအုံးခင်ဗျာ
← Internet download manager v6.18.Build5(for pc)	Network Connections v1.0.6 →